आयुक्त डा. जोशीले दिए पदबाट राजीनामा - kageshworikhabar.com
आयुक्त डा. जोशीले दिए पदबाट राजीनामा
२१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी आयुक्त पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।
उहाँले संविधानको धारा २३८ को उपधारा ‘४’ को खण्ड ‘क’ बमोजिम लिखित राजीनामा दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।
आफू आयुक्त हुँदा सचिवको हैसियतले काम गरेका व्यक्ति नै प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएर आउने भएपछि उनीले बुधबार राजीनामा दिएका हुन् । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रेमकुमार राई २०७१ साउन ९ देखि फागुन २७ गतेसम्म अख्तियारका सचिव भएका थिए भने त्यति बेला जोशी अख्तियारमा आयुक्त थिए ।
२०७१ चैत १९ गते अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त भएका जोशी ६ वर्षे पदावधिका कारण आगामी चैत १९ गते अवकाश पाउँदै थिए । संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले राजीनामा बुझाउनासाथ त्यो स्वीकृत हुने र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएका जोशी अख्तियारमा समेत सचिव भइसकेका थिए । ‘एकेडेमिक’ छवि बनाएका उनी यो अवधिमा विवादमा परेनन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटामा सिफारिस भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस नगरेको बुझिएको छ ।
Previous articleसंवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति निरंकुशतन्त्रको पराकाष्टा : श्रेष्ठ
Next articleआज देशभर कति थपिए काेराेना संक्रमित ?